Umklamo Wewebhusayithi Bellevue Washington
Isenselogic.com yakha kanjani amawebhusayithi akho
Ukwakha iwebhusayithi yebhizinisi lakho kudinga ukuqala ukusuka phansi kuze kube ngamagama asemqoka abantu abawasebenzisayo ukuthola izinsizakalo zakho. Uma iwebhusayithi yakho ingalungiselelwe izinjini zokucinga ezingaba amakhasimende amasha ziya kwabancintisana nabo.
Isinyathelo 1: Ukutholwa Kwebhizinisi Lokuhlaziywa
Hlaziya i- Iwebhusayithi. Sibheka ama-meta sets / amagama angukhiye, umbhalo obonakalayo nekhodi ukubona ukuthi iwebhusayithi yakho imi kahle kanjani ngezinjini ezinkulu zokusesha. Isibonelo, okuqukethwe kwakho kuqondaniswe kahle kanjani namagama asemqoka amakhasimende awadingayo?
Hlaziya izimbangi zakho. Sihlola amawebhusayithi ezincintisana zakho abekwe ezikhundleni eziphezulu ezi-5 ukuthola isu elisebenza kahle kakhulu lokubekwa kwezinjini zokusesha.
Khomba amagama angukhiye asebenza kakhulu. Sakha uhlu olubekwa phambili lwamagama asemqoka aqondiwe ngokususelwa kulokho okufunwa ngamakhasimende. Yini ongayifaka ku-injini yokusesha ukuthola ibhizinisi lakho noma ikhasi lewebhu? Ngemuva kwalokho sithatha lelo gama elingukhiye bese sisebenzisa i-Google keyword planner esingayithola amagama angukhiye afihliwe ungahle ungacabangi ngakho. Siphinde sisebenzise isihleli samagama asemqoka ukuthola inani eliqondile labathengi abasesha amagama angukhiye athile futhi sibhekise kulabo ukukhulisa imali engenayo yebhizinisi.
Isinyathelo 2: Ukuthuthukiswa kwamagama aphambili nocwaningo
Ukuhlaziywa kwamagama asemqoka: Kusuka ohlwini lwethu lwamagama angukhiye, sikhomba uhlu lwamagama asemqoka nemisho. Ukubuyekezwa kwamagama avela kwenye imboni nemithombo. Sebenzisa uhlu lokuqala lwamagama angukhiye bese unquma inani lemibuzo yenjini yokusesha. Ngemuva kwalokho sibhekisa amagama angukhiye ngobuningi, ngamabizo kanye nemishwana.
Izinhloso Nezinjongo. Sichaza ngokucacile izinhloso zakho kusengaphambili ukuze sikwazi ukukala imbuyiselo yakho ekutshalweni kwemali kusuka kunoma yiluphi olunye uhlelo lokukhangisa oluqalayo. Isibonelo, inhloso yakho kungaba ukuthi kube nokunyuka okungamaphesenti angama-30 kuthrafikhi yebhizinisi. Noma ungahle ufune ukuthuthukisa isilinganiso sakho samanje sokuguqulwa samaphesenti ama-2 kuye kumaphesenti ayi-6.
ISINYATHELO 3: UKUTHOBELA OKUQUKETHWE NOKWENZA UKWENZELELA
Dala izihloko zamakhasi. Izihloko ezisuselwa kumagama angukhiye zisiza ukusungula isihloko sakho sekhasi nokuhamba kwamagama akho abalulekile. Dala ama-meta tag. Izincazelo zamathegi we-meta nokusiza ukuthonya ukungena kodwa akusetshenziselwa ngqo amazinga. Beka izigaba zokusesha ngamasu emakhasini. Hlanganisa amagama angukhiye akhethiwe kwikhodi yakho yomthombo wewebhusayithi nokuqukethwe okukhona kumakhasi aqokiwe. Siqinisekisa ukuthi sisebenzisa imihlahlandlela ephakanyisiwe yegama elilodwa kuya kwamathathu amagama angukhiye ekhasini ngalinye lokuqukethwe futhi sengeza amakhasi amaningi ukuqedela uhlu. Siqinisekisa ukuthi amagama angukhiye ahlobene asetshenziswa njengokufakwa okungokwemvelo kwamagama akho angukhiye. Isiza izinjini zokusesha ukunquma ngokushesha ukuthi leli khasi limayelana nani. Indlela yemvelo isebenza kahle kakhulu. Ukuhlolwa okuningi kukhombisa ukuthi amakhasi anamagama angama-800 kuye kwayi-2000 angadlula amafushane. Ekugcineni, abasebenzisi, imakethe, izixhumanisi zokuqukethwe zizonquma ukuthandwa nokubalwa kwezinombolo.
Isinyathelo 4: Qinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho iyasebenziseka
Ngokwe-Google kuseshwa okuningi okwenziwa kumadivayisi eselula kunamadivayisi wedeskithophu. Ukuphendula i-Google iguqule ubuchule bayo bokusesha ukuze ithande amasayithi asebenziseka kalula. Uma iwebhusayithi yakho yamanje ingeyona enobungane ephathekayo ulahlekelwa amakhasimende.
Isinyathelo 5: Ukuhlolwa Okuqhubekayo Nokulinganisa
Hlola bese ulinganisa: Hlaziya amazinga enjini yokusesha kanye nethrafikhi yewebhu ukuthola ukusebenza kwezinhlelo oziqalisile, kufaka phakathi ukuhlolwa kokusebenza kwegama elingukhiye ngalinye. Hlola imiphumela yezinguquko, bese ugcine izinguquko zilandelwa kuspredishithi se-Excel, noma yini onethezekile ngayo.
Isondlo. Ukwengeza okuqhubekayo nokuguqulwa kwamagama angukhiye nokuqukethwe kwewebhusayithi kuyadingeka ukuze kuthuthukiswe ngokuqhubekayo amazinga we-injini yokusesha ukuze ukukhula kungami noma kwehle ekunganakwa. Ufuna futhi ukubuyekeza isu lakho lokuxhumanisa futhi uqinisekise ukuthi izixhumanisi zakho ezingenayo neziphumayo zihambisana nebhizinisi lakho. Ibhulogi ingakunika isakhiwo esidingekayo kanye nokulula kokungezwa kokuqukethwe okudingayo. Okwakho inkampani yokusingatha ingakusiza ngokusetha / ukufakwa kwebhulogi.